Imibuzo evame ukubuzwa - Iris Beauty Co., Ltd.
3.Q: Ingabe uyayamukela i-OEM ODM futhi Ungasenzela yini umklamo?
4.Q: Ngingalindela isikhathi esingakanani ukuthola isampula?
5.Q: Kuthiwani ngesikhathi sokuhola sokukhiqiza ngobuningi?
A: Ngokwethembeka, kuya ngobuningi be-oda nesikhathi sonyaka obeka ngaso i-oda. Imvamisa kungaba izinsuku ezingama-25 - 60. Singumboni futhi sinokugeleza komkhiqizo okuqinile, siphakamisa ukuthi uqale uphenyo ezinyangeni ezimbili ngaphambi kosuku ongathanda ukuthola ngalo imikhiqizo ezweni lakho.
Silapha ukukusiza --- sicela ukhululeke ukusithumela i-imeyili ku- irisbecosmetics@gmail.com.